देशभर बाढीको प्रकोपः २२ को मृत्यु, चार वेपत्ता - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
स्वास्थ्यमन्त्री नै भन्छन्–‘विपन्न परिवारको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा अझै छैन’
म आशा गर्छु, सरकारले छिटो भन्दा छिटो अरु विधेयक ल्याउनेछः सभामुख महरा
डा‍. केसी र सरकारबीचको वार्ता अनिश्चित
सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्दै कांग्रेस, को-कोसँग भयो छलफल ?
सरकारलाई समर्थन कांग्रेसलाई साथ
संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई दवाव
देशभर बाढीको प्रकोपः २२ को मृत्यु, चार वेपत्ता
शनिबार, साउन २८, २०७४
काठमाडौं । शुक्रबार रातिदेखि लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोमा परि २२ को मृत्यु भएको छ । शनिबार विहानसम्म प्राप्त विवरण अनुसार विभिन्न जिल्लामा २२ जको मृत्यु भएको हो भने दर्जनौं घर बगेका छन् भने सैयौं विघा जमिन र बालीनालीमा क्षति पुगेको छ ।
गहमन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बाढी र पहिरोमा परेर देशभरमा २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने चार जना हराइरहेका छन् ।
पश्चिम नेपालका तीनवटा पक्की पुलहरु बगेका छन् । गृहमन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्ला पूर्णरुपमा डुबानमा परेका छन् । त्यसगरी राप्ती नदीपारिको वस्तीसमेत डुबेको गृहले जनाएको छ ।
प्रकोपबाट पीडित बनेकाहरुको उद्धारमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रियरुपमा खटिरहेको गहमन्त्री श्रोतले जनाएको छ । अहिलेसम्मको विवरण अनुसार सुनसरीमा ७, सिन्धुलीमा ४, बाँकेमा ४, झापामा १ र मोरङमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार मात्रै पाँचथरमा पहिरोमा परेर ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
शनिबार बिहानसम्म प्राप्त विवरण अनुसार सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा बाढीले बगाउँदा वालवालिका र वृद्धसहित ६ जनाको शव फेला परेको छ । बाढीका कारण इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनासमेत डुबानमा परेको छ भने बजार जलमग्न बनेको छ ।
मोरङको केराबारी ९ कुसुमे गौडामा लोहोन्द्रा खोलाले बगाउँदा स्थानीय को मृत्यु भएको छ । रातिको बाढीले कुसुमेका ४ घर बगाएको छ भने देवीझोडा, बेलचौरीमा क्षति पुर्‍याएको छ । त्यस्तै केराबारी ५ मा समेत बाढी पसेको छ । केराबारीको डाँगी र मुगुमा समेत बाढीले क्षमति पुर्‍याएको छ । मोरङको सुन्दर हरैंचामा वृद्धाश्रममा रहेका ३ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई बगाएर बेपत्ता बनाएको छ ।
बिराटनगर महानगरपालिका पूरौ जलमग्न देखिएको छ । विमानस्थलमा सुरक्षा गार्डको आवाससमेत डुबेको छ । मोरङ जिल्लामा करिब १५ सय घरहरु डुबानमा परेको प्रारम्भिक रिपोर्ट आए पनि क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । लोहोन्द्रा, बक्राहा लगायतका खोलाले जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।
तर, नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवा रहस्यमय तरिकाले अवरुद्ध हुँदा सूचना संकलन गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । झापामा पनि बाढीले ठूलो मात्रामा जमिन र घरहरु डुबानमा पारेको छ । झापामा बाढीका कारण एकको मृत्यु भएको छ भने दुईजना बेपत्ता बनेका छन् ।
दाङमा बबईको बाढीले तुल्सीपुर बजारलाई डुबानमा पारेको छ भने राजमार्ग भत्किँदा घोराहीसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ । बाँकेको गाँवर खोलामा आएको बाढीका कारण एकै घरका ३ सहित चारजनाको मृत्यु भएको छ । बाढीले गावर खोलाको पुलसमेत बगाएको छ ।
695 पटक पढिएको
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम स्वास्थ्यमन्त्री उप...
काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्य...
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २१ दि...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रा.डा. ग...
‘भगवान’हरूकै अपराधपूर्ण काम
‘डाक्टर भनेका भगवान हुन’ अस्पतालमा जीवन बाँचेर फर्किने हरेकबाट सुन्न पाइन्छ । जी...
डा. गोविन्द केसी काठमाडौँ आउन राजी हुनुको यस्तो छ भित्री कारण
काठमाडौं । तनावकाबीच डाक्टर गोविन्द केसी उपचारका लागि काठमाडौं आउन राजी भएका छन्...
मन्त्री महासेठ ‘यूटर्न’, सिण्डिकेट पूर्ण अन्त्य गर्न सरकार असफल
काठमाडौं । ‘२०७५ साउन १ गतेदेखि सिण्डिकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन्छ’ प्रधानमन्त्र...
डुबान बस्तीका बासिन्दाको अनिदोमै बित्यो रात
भक्तपुर । हनुमन्ते खोला पसेर बितण्डा मच्चाएको बस्तीका बासिन्दाको रात अनिदोमै बित...
सहयोगी हात खोज्दै किड्नी फेल भएका गोरख
बाजुरा । बाँया मृर्गोला फेल भएपछि त्रिबेणी नगरपालिका ३ पुर्वूताका ४१ बर्षीय गोरख...
कान्तिपुरमा उथल पुथल
काठमाडौं । कान्तिपुर दैनिकका उथल पुथल भएको छ । कान्तिपुर छाडेको १० बर्षपछि नाराय...
राजनीतिक परिवर्तनप्रति व्यापक जनअसन्तुष्टि बढ्ने र उपलब्धि गुम्ने खतरा छ
नयाँ हिसावले विधि र पद्दति अनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ । एकता त भविश्य बनाउनका ला...
चिकित्सक संघको आपत्तिजनक निर्णय
काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेशनशील सेवा बन्द गर्ने भ...
अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष काठमाडौंमा पक्राउ
काठमाडौं । अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झंकर साउँद (भास्कर) लाई प्रहरीले...
स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगेका मुख्यमन्त्रीले डा. केसीलाई भेट्न पाएनन्
काठमाडौं। २० दिनदेखि अनशनरत प्राध्यापक डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न ...
सन्दर्भ अङग्रेजी भाषणको
आजभोलि केही मन्त्री तथा नेताहरूले गरेका अङग्रेजी भाषणको चर्चा चुलीमा पुगेको छ । ...
डा. केसीको पक्षमा सडकमा नआउन गगन थापालाई हाम्रो पार्टीको चेतावनी
काठमाडौं । हाम्रो पार्टी नेपालले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा सडकमा नआउन ...